बैशाख ९, २०७३ बिहिवार १९:४५:०० प्रकाशित
कुन तेलमा के छ ?
नरिवलको तेलमा स्याच्युरेटेड फ्याटको मात्रा ज्यादै धेरै छ । यस्तै गाई र भैंसीको घिउमा पनि स्याच्युरेटेड फ्याट बढी छ । यसकारण यी चिल्लो पदार्थले कोरोनरी मुटुको रोग भएकाहरुलाई निकै नै क्षति पु¥याउँछ । बदाम, मकै, सूर्यमुखी, भटमास, तोरी आदिको तेलमा स्याच्युरेटेड फ्याट कम तर मोनो र पोली अनस्याच्युरेटेड फ्याटको मात्रा बढी छ । यो तेल ठीक मात्रामा प्रयोग गरेको खण्डमा मुटुलाई त्यति क्षति पु¥याउँदैन ।
माछाको तेलमा ओमेगा–३ फ्याटी एसिड धेरै पाइन्छ । यसले पनि हृदयघातको सम्भावनालाई कम गर्दछ । तोरीको तेल धेरै पटक तताउँदा पनि अन्य तेलसरह ट्रान्सफ्याटमा परिवर्तन हुँदैन । ट्रान्सफ्याटले मुटुलाई धेरै क्षति पु¥याउँछ । तोरीको तेलको यो पनि एक राम्रो गुण हो । यी सबै तथ्यहरुलाई ध्यानमा राख्दा यो प्रस्ट हुन आउँछ कि कोरोनरी मुटुका रोगीहरुले घिउ र नरिवलको तेल खानु हानिकारक छ ।
३. यी खानेकुराले घटाउछन् स्टामिना
४. उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ वीर अस्पताल भर्ना